Disney sy ny fanodinana sary mihetsika amin'ny seho mitovy amin'ny sarimihetsika marobe | Famoronana an-tserasera
Disney sy ny kanto kanto amin'ny famerenana sary an-tsaina sary mihetsika mitovy amin'ny sarimihetsika sasany
Ao amin'ny tontolon'ny zavakanto dia misy tetika maro ary rehefa afaka mieritreritra ny zava-drehetra fa mipoitra avy amin'ny fahaizan'ny mpanakanto dia misy hatrany ny artifice ao ambadika sy alohan'ny vokatra farany. Amin'ny famoronana tantara an-tsary dia matetika mampiasa modely mitovy toetra manova ny tanana na ny endrika tarehiny fotsiny mba hitsitsiana fotoana hamoronana tsipika. Raha tsara ny vokatra dia tsy misy antony tsy.
Ilay Disney ihany dia nampihatra tamin'ireo sarimihetsika malaza fanta-daza rehefa tsy nanan-tsafidy hahafahana mandefa izy ireo asa amin'ny fotoana voafetra. Ankoatra ny zava-misy fa misy sary mihetsika tena tsara izay ampiasaina ho fototra handikana ny tarehin-tsoratra hafa miaraka amin'izy ireo. Nefa andao lazaina fa ny sary mihetsika sy ny fanangonana ifotony mitovy amin'ny fanompoana dia mamerina amin'ny laoniny ny dihy, fihetsika ary toetran'ny olona malaza toy izany.
Ny dihin'ny Sleeping Beauty ao amin'ny trano mimanda dia voaverina amin'ny hatsarana sy ny bibidia ary io manam-pahaizana io ihany amin'ny fanaingoana afaka mahatsapa ianao fa ny sary mihetsika rehetra dia zahana. Ny hany zavatra miova dia ireo mpihetsiketsika roa mandihy, satria ny sarimiaina lehibe dia ireo izay manome ny dikany, ny zava-misy ary ny hatsaran'io dihy io.
Ny sarimiaina lehibe dia mazàna ataon'ny mpanentana mitarika ny famokarana iray. Ireo no manamarika ny fiasa maneho endrika indrindra amin'ny hetsika ary ampitaina amin'ny interleaves izy ireo ka eo anelanelan'ny sary mihetsika roa, ny X interleaves dia natao mba ho malama araka izay azo atao ny sary mihetsika. Noho io antony io indrindra no nahatonga ny fanaovana sarimiaina manan-danja izay matetika mampiseho ny toetra na ny toetran'ny olona na ny sarimiaina entina amin'ireo animator manam-pahaizana indrindra.
Ao amin'ny horonan-tsary nozaraina dia afaka mahita ny fomba ny sarimiaina dia namboarina indray, fa amin'ny fahasamihafana amin'ny fampiasana litera samihafa. Tsy mora ny mamorona sarimiaina misy kalitao toy izany, ankoatry ny zava-misy, araka ny nolazaiko, raha mila manolotra asa ianao ao anatin'ny fotoana voafetra, dia afaka manatona an'io referansa io ianao mba tsy hisintona afa-tsy endri-tsoratra izay tsotra kokoa noho ny famoronana sary mihetsika vaovao vaovao miaraka amin'ireo toeranao lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Disney sy ny kanto kanto amin'ny famerenana sary an-tsaina sary mihetsika mitovy amin'ny sarimihetsika sasany
Ny rakitsary 5 dia mandrakotra sarimihetsika dimy mahavariana an'i Stanley Kubrick
Matrix: modely ho an'i Jimdo, matihanina ary mandray andraikitra